Tontolo ambanivohitra: manoro hevitra ny tantsaha ny Airtel | NewsMada
Tontolo ambanivohitra: manoro hevitra ny tantsaha ny Airtel
Nandray anjara tamin’ny « Foara iraisam-pirenena momba ny fambolena » (FIA), ny herinandro lasa teo, ny Airtel Madagascar. Fotoan-dehibe iny ho an’ny mpamokatra sy ny mpandraharaha eto Madagasikara sy aty amin’ny ranomasimbe Indianina. Manome tolotra mifanandrify amin’ny rehetra ny Airtel amin’ny alalan’ny tambajotra efa mandrakotra ny Nosy manontolo, hanamora ny asan’izy ireo. Ezahina ny hampirisihana hampiasana ny teknolojian’ny fifandraisan-davitra, indrindra ireo mpamboly any ambanivohitra, hanampy azy ireo amin’ny fihariana ataony.
Tao amin’ny tranoheva, nanehoana ny « Airtel money », tao ihany koa ny nampahalalana ny « mobile banking », ny « bulk », hahazoana manefa vola mitambatra, sy nampahafantarina ihany koa ireo tolotra samihafa tamin’ireo orinasa hafa nandray anjara. Tao ireo toerana natokana ho an’ny 4G/4G+Wifi…; ny “sera@varoboba” na ireo varotra finday avo lenta sy ny tolotra samihafa amin’ny antso. Manakaiky kokoa hatrany ny mpanjifa tantsaha ny Airtel, mihaino sy manoro hevitra azy ireo. Na hita aza anefa ny fandrosoana, mbola lavitra ezaka ny fampiasana teknolojian’ny fifandraisan-davitra, indrindra ny any ambanivohitra. Olana iray lehibe mifampiankina amin’izany ny tsy fisian’ny herinaratra.
« Noho ny tambajotra mandrakotra ny Nosy manontolo sy ny fisian’ny tolotra Airtel money, tombony lehibe izany ho an’ny Malagasy rehetra, amin’ny asa fampandrosoana,ny fiarovana amin’ny tsy fandriampahalemana, sy manamora ny fikirakirana ny vola any amin’ny tontolo ambanivohitra », hoy ny tale jeneralin’ny Airtel Madagascar, iEddy Kapuku.